Blogs, Clogs iyo Sheeko sheeko | Martech Zone
Blogs, Clogs iyo Sheeko sheeko
Sabti, Agoosto 12, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Brian Clark wuxuu wax ka taabtay lamaanihiisii ​​ugu dambeeyay posts on copyblogger oo aan u maleynayo inuu noqon karo 'isku xirka ka maqan' ee Blogs Corporate (Xarig)… Sheeg Sheekada.
Waxaan qoray laba posts taas oo muhiim u ah baloogyada shirkadaha. Sababta ayaa ah in baloogyada shirkaduhu noqon karaan xoogaa oxymoron. Shirkado badan ayaa u fiirsada barta wax lagu qoro inay tahay fidinta dadaalkooda suuq geynta, oo ay weheliso degel, xayeysiin, iyo war-saxaafadeedyo. Shirkadaha kale waxay fuulayaan 'suuqan cusub ee suuqgeynta'. Arrgh! IMHO, baloogyada looma maleynayo inay yihiin suuq geyn, runti waxaa loo maleynayaa inay yihiin abuurista wadahadal lala yeesho akhristayaashaada - shaqaalaha, macaamiisha iyo / ama rajada.
Talada Brian ee labadiisa qoraal ee ugu dambeeyay ayaa ah inay waxtar badan tahay in sheekooyinka loogu sheego nuqulkaaga, tanna waxaa lagu dheereyn karaa balooggaaga. Waa maxay fikrad cajiib ah! Shirkaduhu waa inay qaataan istiraatiijiyadan. Sheekadu waxay noqon kartaa mid daacad ah, mid ku habboon oo waqtigeeda ku dhacda. Sheeko ayaa soo bandhigi karta awooda shirkadaada adigoon dhajin xayeysiin erey bixin ah ama war saxaafadeed ah. Iyo story sheeko waxay noqon kartaa bilowga wadahadal argagax leh oo dhexmara shirkaddaada iyo dadka akhriya bartaada.
Sheeko-sheegiddu waxay noqon kartaa istiraatiijiyad ku habboon shirkaddaada blog, iyadoo laga fogaanayo dhabar jabinta aan daacadnimada ahayn oo horay loo ansixiyay xirmid.
Sheeg sheekadaada. U sheeg sheekooyinka macaamiishaada. Xitaa u sheeg sheekooyinka rajadaada.
Falanqaynta Xisaabiyaha Lacag-bixinta
Jul 21, 2007 markay ahayd 7:05 AM
nasiib daro taasi waa talaabada xigta ee aan ku qaadanayo blogga…. oo aad lacag badan ku sharadayso 😛. Waxaan rajeynayaa inay u qalanto dadaalkeyga….